कa्गा 3090०। ० वैक्यूम क्लीनर समीक्षा ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | घर, समीक्षा
आज ब्लूसेन्समा हामी सफा गर्दैछौं। हामी केहि दिनको लागि घरमा परीक्षण गर्न धेरै भाग्यशाली छौं बजारमा एक उत्तम सुसज्जित स्वायत्त भ्याकुम क्लीनरहरू मध्ये एक। को स्पेनी उत्पादन को कa्गा 3090०। ० भ्याकुम क्लीनरले झण्डा एकदमै माथि छोयो। परीक्षण दिनहरूमा उसले प्रस्ताव गरेको छ वास्तवमै राम्रो प्रदर्शन र परिणामहरू.
एक समयमा जब यस प्रकारको साना उपकरणहरू फूलेको छ। यस क्षेत्रका लागि कa्गासँग धेरै योगदान छ। र यसले यस्तो गर्छ जुन अन्य फर्महरूसँग समान पाटीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन दुगुना माथि मूल्यहरूमा समान भ्याकुम क्लीनर प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह, कa्गा 3090०। ० एक बुद्धिमानी छनोट हो। र अधिक अब विचार तपाईं% 47% छुटमा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ शानदार कa्गो 3090०। ०।
1 कa्गा 3090०। ० साधारण डिजाइन तर आश्चर्यको साथ
2 लेजर टेक्नोलोजी जसले फरक पार्छ
3 कa्गा 3090० XNUMX ०, धेरै थोरैको लागि धेरै
4 यो भ्याकुम क्लीनरले के प्रस्ताव गर्दछ?
5 सभ्य स्वायत्तता छोटो छैन
6 अझ सजिलो प्रयोगको लागि अनुरूप अनुप्रयोग
7 कa्गो 3090० XNUMX ० वैक्यूम क्लीनर डाटाशीट
कa्गा 3090०। ० साधारण डिजाइन तर आश्चर्यको साथ
यदि हामी भ्याकुम क्लिनरको भौतिक पक्षलाई हेर्छौं भने हामी कसरी हेर्छौं यसको उपस्थिति हामीलाई परिचित छ। वस्तुतः यस प्रकारका सबै भ्याकुम क्लीनरहरू एक अर्कासँग धेरै मिल्दोजुल्दो छन्। स्पेनी फ्याक्ट्री सेकोटेकको कa्गा 3090०। ० पनि छ गोलाकार आकार र एक उचाई छ दस सेन्टीमिटर भन्दा अलि कम.
शीर्षमा, अरू समान यन्त्रहरूसँग के हुन्छ यसको विपरित, हामी फेला पार्दछौं एक चिल्लो र सफा सतह। मध्य क्षेत्रमा बाहिर खडा एउटा सानो बम्प जहाँ उपन्यास लेजर अवस्थित हुन्छ जसले सफा गर्दा फर्नीचर र अन्य अवरोधहरू जोगिन हाम्रो घरको एक "म्यापि” "गर्छ। कुनै श .्का छैन एक नवीनता हाइलाइट गर्न हामी अर्को कुरा गर्नेछौं जसको बारेमा।
मा तल कa्गा 3090०। ० भ्याकुम सफा गर्ने हामी धेरै तत्वहरू फेला पार्दछौं। मध्य भाग मा, मुख्य वस्तु फेला पर्‍यो, भ्याकुम ब्रश। यो एकल छ डबल ब्रश जुन दुई सिलिको का लाइनको दुईवटा रेखा काट्छ। दुबै सामग्रीको संयोजनले फोहोर स collection्कलन धेरै कुशल बनाउँछ।
पक्षहरुमा यो केन्द्रीय ब्रश हामी फेला पार्दछौं दुई ठूला पा .्ग्रा। तिनीहरूसँग भ्याकुम क्लीनर फुर्तिले घर वरिपरि घुम्छन्। र तिनीहरूसँग ड्याम्पि system प्रणाली छ जसले कa्गा height० 3090 ०० लाई उचाइमा पार्छ जब यसले कार्पेट जस्ता डेन्सर सतहहरू पत्ता लगाउँदछ।
केन्द्रीय ब्रश अगाडि हामी पोइन्ट भेट्टाउछौं जहाँ हामीले जोड्नुपर्दछ सानो ब्लेड ब्रश। यो सानो ब्रशले सजिलैसँग भ्याकुम क्लिनरमा परिचय गराउन सबैभन्दा गहिरो मलबे स collect्कलन गर्न मद्दत गर्दछ। मेशिनले यो ब्रश प्रयोग गर्न घुमाउँदछ जब यो धूलो वा अन्य तत्वहरूको स dete्ग्रह पत्ता लगाउँदछ।
के तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ? ठीक छ, किन्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् la शानदार कa्गा 3090० XNUMX ०.
शीर्ष अन्त्यमा हामी फेला पार्दछौं स्टीयरिंग व्हीलसाइड पाels्ग्राहरू भन्दा धेरै सानो। र यसको छेउमा, धातु जडानहरू जसको माध्यमबाट ब्याट्री चार्ज हुन्छ कोa्गो 3090०। ०। ठीक जहाँ भ्याकुम क्लीनर "पार्क" यसको चार्जिंग आधारमा जब यो सफाई समाप्त गर्दछ वा जब यसलाई ब्याट्री रिचार्ज गर्न आवश्यक हुन्छ।
अन्तमा, पछाडिको मा छ क्षेत्र जहाँ हामी जम्मा डक गर्नेछौं जसको साथ हामी यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्दछ, खाली बनाउनका साथै, मोपिंग वा स्क्रबिंगको लागि माटो
ट्या tank्क समायोजित हुन्छ आरामसँग "क्लिक" को साथ र यो उही तरीकाले हटाइनेछ। हामीले फिर्ता लिनु पर्छ पानी र सफाई उत्पादनहरु थप्न क्याप।
लेजर टेक्नोलोजी जसले फरक पार्छ
हामीले भनेझैं, त्यहाँ धेरै फर्महरू छन् जसले स्वायत्त भ्याकुम क्लीनर सिर्जना गर्न सुरू गरेका छन्। अहिले सम्म, शारीरिक विशेषताहरु व्यावहारिक उही थिए। तर प्रत्येक उपकरणको टेक्नोलोजीको सम्बन्धमा, यो त्यहि हो जहाँ हामी सबैभन्दा ठूलो भिन्नता पाउँछौं.
एउटा बजारमा उत्तरी अमेरिकी बहु-आई-रोबोटको यसको रोम्बा मोडेलहरूको उच्च प्रतिष्ठा थियो। तर के परीक्षणहरू गरेपछि यो कa्गाको साथ, र परिणामहरू हेरिए यसले के प्रस्ताव गर्दछ, हामी बुझ्दछौं सेकोटेक फर्मले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ यो बजार मा।
एक कंगला 3090० XNUMX ० भ्याकुम क्लीनरलाई यसको प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपन्यासहरू मध्ये एक लेजर हो जुन यो सुसज्जित छ। एक लेजर emitter कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अवरक्त टेक्नोलोजी संग सुसज्जित। जुन सँगै शीर्ष-अफ-लाइन-सफ्टवेयर बनाउँछ कa्गा 3090०। ० ले हाम्रो घरको सतहको सहि नक्शा बनाउँदछ.
कa्गा 3090० XNUMX ०, धेरै थोरैको लागि धेरै
बजारमा यसको महान् प्रतिद्वन्द्द्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रविधिको सामना गर्नुपर्‍यो, भिडियो क्यामेरामा आधारित रोम्बा 980०, कa्गा 3090० XNUMX ०० को लेजर पठन पर्याप्त बढी विश्वसनीय र कुशल छ। एक अंतर जुन यसको अपरेशनको बेला भ्याकुम क्लीनरको व्यवहारमा ध्यानयोग्य छ।
कहिल्यै फर्नीचर वा कुर्सी संग टकराव नगर्नुहोस्, र प्रत्येक कुना सफा गर्दछ जुन तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि समयमा डिभोरिएन्ट बिना। र यो किनभने छ प्रत्येक मिनेट धेरै-360०-डिग्री लेजर रीडिंगहरू पाएर फेला परेका प्रत्येक वस्तुलाई पहिचान गर्दछ सबै कुरा कहाँ छ भनेर जान्न।
जब यो एक पत्ता लगाउँछ ठूलो कोठास्वत: खाली स्थानलाई आयतहरूमा विभाजन गर्नुहोस् क्रम मा ती गर्न। त्यसैले सफाई बढी कुशल छ। बजारमा यसको प्रतिद्वन्द्वी के प्रस्ताव गर्न सक्षम छन् के बारे मा विस्तार मा जानु बिना, हामी कसरी हेर्नुहोस् आधा भन्दा कम मूल्यको लागि, यो अपेक्षाहरू पार गर्न सक्षम छ डाटा र परिणामहरूको साथ। र यी सबै केवल € 349। For को लागि खराब छैन!
यो भ्याकुम क्लीनरले के प्रस्ताव गर्दछ?
यो राम्रो प्रश्न हो जब हामी बजारको निन्दा गर्दै कुनै पनि उत्पादन प्राप्त गर्न सक्छौं। यो अवस्था मा, Cecotec वैक्यूम क्लीनर एक विशेष सुविधा मा छ नवीन अफिसहरु को प्रस्ताव को कारण प्रतिस्पर्धाको तुलनामा। र बहुमुखीताको लागि यसले विभिन्न प्रकारको सफाई प्रदर्शन गर्दछ।
बक्स भित्र हामी फेला पार्दछौं, भ्याकुम क्लीनरको अतिरिक्त, धेरै तत्वहरू। को तरल पदार्थ र सफाई उत्पादनहरूको लागि ट्या tank्क जसको साथ हामी स्क्रबिंग मोड र मोप मोड प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामीसँग धुलाई मिल्ने बाहिरी कपडाको प्रतिस्थापन छ। हामी पनि भेट्छौं दुई ब्लेड ब्रशेस, जुन बायाँ तिर अवस्थित छ। धेरै सफा गर्न एक ब्रश मेशिनको फोहोरको सम्भावित भण्डार मुनि। र यसका अतिरिक्त निर्देशन पुस्तिका र वारेन्टी पुस्तक, हामी फेला पार्दछौं रिमोट कन्ट्रोल जसले ब्याट्री पनि समावेश गर्दछ।
कa्गाले गरेको iration० 3090 ०० बाट अभिलाषा पुगेको छ २००० पास्कल सक्शन पावर। रोम्बा 1670 980० द्वारा प्रस्ताव गरिएको १XNUMX to० सँग तुलना गर्नुहोस्। यो पनि एक छ कार्पेट मान्यता मोड जुन धेरै उपयोगी छ। जब यो पत्ता लगाउँछ कि सतह कपडा हो अधिक तीव्र सफाईको लागि यसको शक्ति स्वचालित रूपमा डबल्स गर्दछ.
माथि उल्लिखित लेजर एमिटरको अतिरिक्त, कa्गो 3090०। ० ले यसका प्रतिद्वन्द्वीहरूको सन्दर्भमा अन्य नवीनताहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ। हामी संग छ मोप गर्न विकल्प र स्क्रब मोडको साथ। हो यो हो, कa्गो 3090०। ० ले हाम्रो लागि घर पनि स्क्रब गर्दछ। र यो सम्भव छ ट्या a्कीका लागि धन्यबाद हो जुन सजिलैसँग स्थापित हुन्छ जहाँ हामी पानी र सफाई उत्पादन थप्न सक्छौं।
निस्सन्देह विकल्पहरू जसले यस भ्याकुम सफा गर्ने बनाउँदछ सफाई रोबोट मात्र खाली छैनधेरै अरूसँग फरक पार्नुहोस्। यदि हामीले यसको बजारमा एक अर्काको तुलनामा देख्यौं भने बजारमा अरूको तुलनामा केही ध्यान दिएका हुन्छौं।
यो लिंकमा क्लिक गरेर अब खरीद गर्नुहोस् कंगो 3090० Cong ० वैक्यूम क्लीनर आधिकारिक स्टोरको साथ छुट
सभ्य स्वायत्तता छोटो छैन
एक पक्षलाई ध्यानमा राखिन्छ कि एक वा अर्को मोडेलमा निर्णय गर्दा यो स्वायत्तता हो। कa्गा 3090०। ० भ्याकुम क्लीनरसँग एक छ 3.200,२०० mAh लिथियम ब्याट्री। र Cecotec ले यो प्रस्ताव गर्न सक्षम छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ ११० मिनेट सम्मको स्वायत्तता। पक्कै केहि सफाई र तीव्रता को आधारमा भिन्न हुन सक्छ चयनित।
तर यदि यस भ्याकुम क्लीनरले प्रस्ताव गरेको स्वायत्तता तपाईंलाई थोरै देखिए पनि, तपाईं चिन्ता लिनुहुन्न। Cecotec यसको सितारा वैक्यूम क्लीनर को साथ सम्पन्न छ धेरै रोचक प्रविधि। यसको साथ ब्याट्री क्षमता अब कुनै समस्या छैन। जब कa्गा 3090० XNUMX ० भ्याकुम क्लीनरले पत्ता लगाउँदछ कि यो ब्याट्रीमा कम छ, यो स्वचालित रूपमा यसको चार्जिंग बेसमा फर्किन्छ. Y कहिले सफाई फिर्ता समाप्त गर्न पर्याप्त स्वायत्तता छ। तर यसको सफ्टवेयरका लागि धन्यवाद यो याद गर्न सक्षम हुन्छ कि यसले कहाँ छोडेको थियो। त्यसैले सफाई जारी छ उही ठाँउबाट जहाँ तपाईले यो छोड्नुभयो.
अन्य उपन्यासहरू जुन यो भ्याकुम क्लीनरसँग छनौट गर्ने सम्भावना हो डबल मोड। यसैले उही साइटबाट दुई पाससम्म बनाएर गहिरो सफाई प्रदर्शन गर्दछ। साथै, पनि हामी प्रतिबन्धित क्षेत्र चयन गर्न सक्छौं जे भ्याकुम क्लीनर प्रवेश गर्दैन। वा यसलाई अर्को तरिकाले गर्नुहोस्, केवल क्षेत्र सफा गर्नुहोस् जुन हामी सफा गर्न चाहन्छौं।
अझ सजिलो प्रयोगको लागि अनुरूप अनुप्रयोग
भ्याकुम क्लीनरमा जुन हामी स्मार्टफोनसँग चलाउन सक्छौं, यो धेरै छ बराबर सम्मको अनुप्रयोग हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र Cecotec डिजाइन गर्न कसरी थाहा छ एक अनुप्रयोग जसले कa्गो 3090० XNUMX ० भ्याकुम क्लीनर प्रयोग गरीरहेको अपेक्षाबाट सजिलो बनाउँदछ। यद्यपि हामीलाई थाहा छ यो भ्याकुम क्लीनर योसँग रिमोट कन्ट्रोल पनि छ। एउटा कमाण्ड जुन हामी सबै भन्दा आधारभूत आदेशहरू दिन सक्छौं र त्यो आश्चर्यजनक कार्य गर्दछ।
तर हामी भन्छौ, मोबाइल अनुप्रयोग अधिक कुशल छ र अधिक संभावनाहरु प्रदान गर्दछ प्रयोगको। वास्तवमै साधारण मेनूमा हामी यो छनौट गर्न सक्दछौं सफाई मोड। ती मध्ये हामीसंग सरल छ, "स्वत:" मोड जसमा मेसिनले एक अर्को बाट अर्कोको उत्तम ढाँचाको साथ काम गर्दछ जसमा उसले चोक बिना कुना छोड्दैन. तर हामी किनाराहरूको सफाई पनि चयन गर्न सक्छौं चयन गरिएको क्षेत्र को, वा कि आकांक्षा एक सर्पिल मा बाहिर गरिन्छ बाहिरबाट।
हामी एक विशिष्ट स्थान इंगित गर्न सक्दछौं कि केवल तपाईंलाई गार्नको लागि गन्दा भयो र चार्जिंग बेसमा फर्कनुहोस्। चयन गर्न सक्षम भइरहेको यदि आकांक्षा पूरा गरियो फारम "इको" कम ऊर्जा खपत संग, "सामान्य", वा "टर्बो".
हामीले वास्तवमै मनपराएको कुरा के हो हामी देख्न सक्छौं, एक पटक काम सकिएपछि सबै ठाउँहरू जहाँ तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ, कोठाको विस्तृत "म्यापि" "परामर्श गर्दै जहाँ उनले काम गरेका छन्। समावेश यसको जडानको लागि धन्यवाद, हामी सक्दछौं वास्तविक समयलाई हेर्नुहोस् जुन क्षेत्र तपाईं पार गर्दै हुनुहुन्छ। अन्य भ्याकुम क्लीनरहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको केहि छैन जुन कa्गो 3090० XNUMX ० को मूल्यमा तीन गुणा पनि छ।
साथै, अनुप्रयोग मार्फत, हामी गतिविधि को इतिहास मा परामर्श गर्न सक्छौं। त्यसोभए हामी जाँच गर्न सक्दछौं जब हामीले अन्तिम पटक लुकायौं। वा पटक हामीले यस हप्ता बैठक कोठाको घर सफा गर्यौं। र हामीसँग छ धेरै चाखलाग्दो उपयोगिता। हामी सक्छौं कार्यक्रम, यदि यो एक अलार्म हो, सफाई सक्रिय हुन र सुरु गर्न हामी चाहानु भएको समय।
कa्गो 3090० XNUMX ० वैक्यूम क्लीनर डाटाशीट
मोडेल कa्गा 3090 XNUMX। ०
सफाई मोडहरू 10
सक्सन पावर २,००० पासकलहरू
शक्ति स्तरहरू 3
ब्याट्री 3200 mAh
स्वायत्तता 110 मिनेट
चार्ज समय3र4घण्टा बीच
ठोस ट्या tank्क क्षमता 600 एमएल
तरल ट्या tank्क क्षमता 180 एमएल
नेभिगेसन आईटेक लेजर ºº०º
आधार चार्ज गर्दै SI
रिमोट कन्ट्रोल SI
आफ्नै अनुप्रयोग SI
लि link्क खरीद गर्नुहोस् Cecotec कांगो श्रृंखला 3090
मूल्य 349.00 €
कa्गा 3090 XNUMX। ०
पैसाको लागि अपराजेय मान
स्क्रब मोड र मोप मोड
स्वायत्तता निर्माता द्वारा स less्केत भन्दा केहि कम
अपेक्षित भन्दा बढी आवाज तर प्रतिस्पर्धा भन्दा कम
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » कa्गा 3090० XNUMX ० वैक्यूम क्लीनर समीक्षा
कालो शार्क २ स्पेन आइपुग्छ, यो मोबाइल गेमि gको नयाँ राजा हो